4 Ụzọ Mee Android WiFi File Nyefee Mfe
1. Android WiFi File Nyefee
2. Android USB File Nyefee
Ị na-ahụ na-eji gị eriri USB Weghaa faịlụ n'etiti gị na PC na gị Android ekwentị a n'efu nke oge? Ị na-achọ gị ike mfe izipu foto na faịlụ n'etiti Android ngwaọrụ? Isiokwu a gosiri ụfọdụ mfe ụzọ ịkwaga faịlụ n'etiti Android ngwaọrụ, nakwa dị ka n'etiti Android ntị na kọmputa gị.
Method 1. Bluetooth - Nyefee Android Foto na égwu-ejighi eriri maka Free Method 2. Google Drive - eme File Nyefee maka Android effortlessly Method 3. AirDroid - Nyefee Android faịlụ ka PC n'elu WiFi Method 4. Wondershare MobileGo for Android - ejighi eriri nyefee faịlụ n'etiti Android Devices
Method 1. Bluetooth - Nyefee Android Foto na égwu-ejighi eriri maka Free
Bluetooth, a wireless technology, nwere ike iji na nyefee faịlụ n'etiti gam akporo igwe ma ọ bụ mbadamba n'elu a adịghị anya. Na-esonụ, m depụta ya uru na ọghọm-enyere gị aka ghọtara. Mgbe ahụ, ị ​​pụrụ ịgbaso mfe nzọụkwụ ime Android faịlụ nyefe na Bluetooth.
Na-achọ ọ internet.
Ngwa na mfe.
Mfe iji on fọrọ nke nta niile Android ngwaọrụ.
Bugharịa faịlụ site na Android na-Android na Android na-PC. N'efu.
Na-enwe ike ibufe obere faịlụ.
Ị nwere ike ghara họrọ ọtụtụ faịlụ nyefee.
Soro 3 nzọụkwụ nyefee Android photos n'elu Bluetooth
Nzọụkwụ 1: Họrọ foto ma ọ bụ faịlụ na ị chọrọ nyefee na gị android ngwaọrụ, na họrọ 'ekere òkè site na' icon, ma họrọ 'Bluetooth' (ma ọ bụrụ gị Bluetooth na-adịghị agbanwuru ha, na mgbe ahụ, ị ​​ga-kpaliri na-atụgharị ya na) .
Nzọụkwụ 2: Ngwaọrụ gị ga-ahụ na-amalite na-achọ Bluetooth ngwaọrụ dị nso ya. Cheta, ọ dị mkpa na ngwaọrụ nnata na nwere ya Bluetooth tụgharịa on- nke a nwere ike ọtụtụ mgbe-adị mfe na-enweta site na-aga n'ime 'Ntọala' na-achọta ndị Bluetooth nhọrọ, nke ga-adị mfe-ahụ na fọrọ nke nta niile Android ngwaọrụ. N'otu oge, ọ hụrụ, họrọ ya.
Nzọụkwụ 3: Your ngwaọrụ nnata ga-ahụ gwa gị na e nwere faịlụ ịbụ zitere ya. Nabata na-abata faịlụ. Ị ga-ahụ ndị nwere ọhụrụ faịlụ na ngwaọrụ gị.
Bluetooth nwekwara ike-eji na ọtụtụ Android ngwaọrụ ibufe ngwa - ihe atụ na Samsung Galaxy Cheta, ị nwere ike izipu ngwa site Bluetooth site na-ahọpụta ngwa baajị na isi menu na mgbe ahụ tapping na menu bọtịnụ na ala n'aka ekpe n'akụkụ nke ngwaọrụ, ị ga-ahụ otu nhọrọ 'ekere òkè ngwa'.
Method 2. Google Drive - eme File Nyefee maka Android effortlessly
Google Drive bụ a nnọọ uru Android WiFi faịlụ transfer ngwa. Ọ na-kere site Google, nke na-enye gị ike bulite onwe gị data, gụnyere photos, akwụkwọ faịlụ na ndị ọzọ si gị gam akporo ngwaọrụ ka ígwé ojii. Mgbe ahụ, ị ​​mfe ohere ndị a data n'ebe ọ bụla ị na-aga ma na-eso ha na ndị enyi gị na ezinụlọ.
Download Google mbanye si Gooogle Play >>
Ị nwere ike ịnweta faịlụ gị ọ bụla na ngwaọrụ site na gị Google Drive Akaụntụ.
Ị nwere ike họrọ ọtụtụ faịlụ, ike nchekwa, òkè na iche iche nke ndị na ohere ya niile bụla na ngwaọrụ na-akwado Google mbanye.
The ohere nyere maka free na-ejedebeghị (15GB, ma ihe nwere ike zụrụ).
Adịghị na-akpaghị aka ndabere niile ozi na ngwaọrụ gị, ị ga-aka họrọ.
Soro 6 iji mee Android faịlụ nyefe na Google Drive
Nzọụkwụ 1: Mepee Google mbanye ngwa na bulite ọhụrụ akwụkwọ site na-ahọpụta bulite icon, na ala ekpe nke ihuenyo.
Nzọụkwụ 2: Họrọ ngwa site na nke na-ịchọrọ ị mezue edinam. Nke ahụ bụ, ma ọ bụrụ na ị chọrọ bulite a song, i nwere ike họrọ 'Music Player' nhọrọ.
Nzọụkwụ 3: The foto ị uploaded ga-apụta.
Nzọụkwụ 4: Ugbu a, na gị android ngwaọrụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ngwaọrụ i nwere na Google Drive arụnyere, ọ bụrụ na ị abanye n'ime akaụntụ gị niile gị akwụkwọ ga Ibu Ibu na-egosi.
Nzọụkwụ 5: Ị nwere ike ugbu họrọ image ị mbụ uploaded ngwaọrụ ọzọ, na ibudata ya jidesie nke mgbe ngwaọrụ ịchọrọ faịlụ na.
Nzọụkwụ 6: gị ugbu a nwere faịlụ na-adịgide adịgide na gị Google Drive na akaụntụ, na nwere ike ịnweta ya na ibudata ya jidesie ọ bụla na ngwaọrụ site na Google Drive ngwa.
Method 3. AirDroid - Nyefee Android faịlụ ka PC n'elu WiFi
AirDroid bụ a nnọọ ama ngwá ọrụ, ime ka ị jikwaa ma nyefee Android photos, ụdaolu, video na ndị ọzọ si a nchọgharị na weebụ.
Eriri ndabere-elu ma jikwaa gị dum Adroid faịlụ site na gị PC.
Izipu ozi, na-photos, dezie kọntaktị niile enweghị ihe ọ bụla eriri USB achọrọ.
Ihe mmezi ego na-ịbụ ike-ejighi eriri soro ma nyochaa gị Android ekwentị ma ọ bụrụ na ị hapụ ya, na ọ bụrụ na achọrọ ị nwere ike ihichapụ niile ozi na ya.
Achọ a otu Wi-Fi njikọ dị n'etiti gị na PC na Android ngwaọrụ.
Soro 6 nzọụkwụ iji AirDrop nyefee faịlụ site na PC na-Android, na Anglịkan
Nzọụkwụ 1: Mepee Google Play Store, chọọ AirDroid na ibudata ya.
Nzọụkwụ 2: Open AirDroid na gị Android ngwaọrụ mkpanaaka, ọ ga-abịa na a mmapụta elu-arịọ gị ka enyere ezigbo oge-ekere òkè na gị PC, họrọ Kwado. Ị ga-ahụ weere site na homepage, na n'ebe ahụ ka ị ga-nyere na a adreesị weebụ ịbanye gị internet nchọgharị search mmanya.
Nzọụkwụ 3: Ozugbo i banyere adreesị weebụ na PC gị na, ị ga-abata na nke a na ihuenyo. Iji nweta ọrụ a, ị ga-achọrọ iji nye adreesị ozi-e na paswọọdụ. Alternatively, ị nwere ike banye site a Google Akaụntụ, Facebook ma ọ bụ Twitter.
Nzọụkwụ 4. Mgbe ọ banyere n'ime akaụntụ gị na PC, ị ga-ugbu a mkpa ime otu ihe ahụ na ekwentị gị.
Steo 5. Otu nhọrọ na ọrụ a bụ aka 'Chọta ekwentị', nke a nwere nnọọ uru atụmatụ nke inwe ike remotely ehichapụkwa ekwentị gị nke niile dị mkpa data bụrụ na nke na-ezu ohi, ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị hapụ ekwentị gị. Ọ na-ike nyochaa otú ọtụtụ ugboro passcode e banye ekwentị gị, na i nwere ike ịgbanwe kacha mgbalị kwere tupu ngwaọrụ akpọchi onwe ya. Ị na-adịghị-anabata nke a ma ọ bụrụ na ị na-adịghị achọ ka, ma ọ bụ kemgwucha aka ngwá ọrụ na ike inyeaka ukwuu nke na ụjọ na nrụgide gburugburu adịkwa ekwentị gị, karịsịa ma ọ bụrụ na e nwere ozi dị mkpa na ya.
Nzọụkwụ 6: Ekele! Ozi nile nke si gị akporo ekwentị ugbu a na e-ejighi eriri-ebute site ná gị na kọmputa. Ị nwere ike ugbu rụọ ọrụ ekwentị gị site na kọmputa gị. Ị nwere ike izipu ekwentị ozi ndị si na kọmputa gị, na mgbe ahụ, mgbe ị na-esi na ị ka nwere ike na-agbaso otu mkparịta ụka na mkpanaka gị na. Oge ọ bụla ị na-agbanwe a na kọntaktị na kọmputa gị, ọ ga-akpaghị aka melite na ekwentị gị mgbe ọ na-ejikọrọ na WiFi, dị ka e gosiri n'okpuru:
Method 4. Wondershare MobileGo for Android - ejighi eriri nyefee faịlụ n'etiti Android Devices
N'ụzọ dị mwute, ọtụtụ ngwa na dị ka eriri nyefee foto na faịlụ n'etiti Android na ngwaọrụ ndị na-ejighị n'aka na-mgbagwoju anya iji. Tụkwasị na nke a, na-ebufe faịlụ n'elu Bluetooth bụ ukwuu iji nwayọọ, na na na-enye ohere obere faịlụ nyefe. Ya mere, ọ bụrụ na ị chọrọ ibufe a otutu photos, ọ bụghị na-enye aka. Luckily, Wondershare MobileGo for Android-enye gị ohere eriri jikọọ ihe karịrị otu Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba ka PC, otú i nwere ike mfe ịkwaga ngwa ọdịnala na photos n'etiti Android ngwaọrụ. Ihe bụ ihe ọzọ, ọ na-akwado fọrọ nke nta niile Android mobiles na mbadamba.
Mfe, dị ọcha ma dị mfe iji.
Kpamkpam azụ elu ọ bụla Android ngwaọrụ ị jikọọ kọmputa gị site na software.
Bugharịa kọntaktị, videos, music, photos, ngwa ọdịnala na akwụkwọ n'etiti abụọ ọ bụla na gam akporo ngwaọrụ i jikọọ na software
Nyefee ndị a faịlụ kwuru n'elu si Android ngwaọrụ PC, na Anglịkan.
Ọ bụghị Free (Otú ọ dị, i nwere ike iji nke a software for free maka mbụ 15 ụbọchị)
Nke a software na-arụ ọrụ na USB cables, otú ị nwekwara ike jikwaa Android ngwaọrụ n'ejighị WiFi ma ọ bụrụ na ị dị njikere jikọọ USB cables.
Dị ka m kwuru n'elu, Wondershare MobileGo for Android nwekwara-enyere gị aka nyefee ngwa, photos, music, video, foto na dọkụmentị n'etiti Android ngwaọrụ na PC. Ebe a, m dị nnọọ na-ebufe ngwa n'etiti Android ngwaọrụ dị ka ihe atụ. Mara banyere Android faịlụ nyefe na Wondershare MobileGo for Android, biko pịa ebe a.
Soro nzọụkwụ nyefee ngwa site otu Android ọzọ
Nzọụkwụ 1: Download na-emeghe Wondershare MobileGo for Android na PC gị. Họrọ 'Jikọọ ngwaọrụ ọhụrụ', ya mere na ị na-nyere na a QR koodu.
Nzọụkwụ 2: Mepee a QR nyocha ngwa na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba, na ike iṅomi koodu na kọmputa iji Jikọọ na ngwaọrụ gị.
Nzọụkwụ 3: Nabata arịrịọ mmapụta na-ekwe ka njikọ na PC gị.
Nzọụkwụ 4. Ozugbo ejikọrọ, họrọ si dobe ala menu ọ bụla ị chọrọ mbupụ gị ngwaọrụ ọzọ.
Ndabere Android Ngwaọrụ & Weghachi na 1 Pịa
3 Ụzọ nkwado ndabere na mpaghara Android Pictures
3 Ngwaọrụ nkwado ndabere na mpaghara Android SMS
3 Ụzọ nkwado ndabere na mpaghara Android Ndi ana-akpo
All ihe ọmụma banyere iTunes U maka Android
Best iTunes maka Android Ngwá Ọrụ maka Ị
Ịgbanwee Data si Nokia ka Android
Detuo iTunes Music ka akporo ekwentị
Top 5 iTunes Iru Android égwu
Best 7 Android Photo Manager: Jikwaa Photo Gallery na ala
Top 6 Android App Manager: Manager All égwu na gị android ngwaọrụ effortlessly
Top 8 Android Kpọtụrụ Manager ka Nọgidenụ Ndi ana-akpo Ọfọn Hazie
Olee otú iji hazie Android Ndi ana-akpo si PC
The Top 10 Samsung Ngwaọrụ Managers
Android egweri biini - Olee otú iji weghachi ehichapụ faịlụ na Android
Ise Ihe Maara Banyere VLC si Android Player
Olee otú Hichapụ Facebook ozi ozi na android
8 Kasị-jụrụ ajụjụ banyere Google Ugbu a ngwaọrụ
Na-atụ aro Video Formats N'ihi LG Optimus
Otú nyefee ngwa site Android ka ọzọ Android
> Resource> Android> 4 Ụzọ Mee Android WiFi File Nyefee Mfe